EURAUD oovimba-Funda ukuRhweba
Umlenze we-EUR / AUD ePhakamileyo kwiiKhadi!
Ukuhlaziywa: 9 April 2021
I-EUR / AUD idlala ngommandla owomeleleyo emva kokutsiba ngaphezulu kwemiqobo ethile yexesha elikufutshane. Esi sibini sibonisile ukujika umqondiso, kodwa sisafuna isiqinisekiso ngaphambi kokuhamba ixesha elide.
Isenzo sexabiso sibonise ukuba intshukumo esezantsi iphelile kwaye isibini sinokukhulisa umlenze omtsha. Ukungazinzi kuphezulu kwixesha elifutshane, yiyo loo nto kufuneka silumke xa sithatha isigqibo sokuhamba ixesha elide.
Uhlalutyo lweTshathi ye-EUR / AUD H4!
I-EUR / AUD ibalekile kunxantathu omncinci kwaye ngoku ibekwe ngaphezulu komgca wehlayo kunye nasekunene ngezantsi kwe-23.6% nangaphantsi komgca ophakathi (ML). Ngokobuchwephesha, isibini sasilindelwe ngandlela ithile ukuba sonyuke emva kokophula ngaphezulu komgca omkhulu we-downtrend.
Ukuqhawuka ngaphezulu komgaqo wexeshana we-downtrend kunye ne-R1 (1.5551) kuqinisekisiwe kukuphinda kubekhona. Ngoku, sifuna ukuqhekeka okusebenzayo ngaphezulu kwe-1.5610, 23.6%, nangaphezulu komgca ophakathi (ML) ukuqaphela ukuhamba ixesha elide
I-EUR / AUD iyarhweba kwindawo engqingqwa. Ke, kufuneka silinde inqanaba lokuthatha amanqanaba oxhathiso kwangoko ngaphambi kokuba sithathe inyathelo.
tags Aud, Aussie, i-eur, EURAUD, Uhlalutyo Technical, Ingcinga yokurhweba
I-EUR / AUD engunxantathu yoLungelelwaniso izisa ukubuyela umva!
Ukurhweba nge-EUR / AUD kwinqanaba le-1.5518 kwaye kubonakala ngathi kuzimisele ukuqhubeka nokukhula kwakhona emva kokophula ngaphezulu komgca wehla. Amaxabiso aprintwe kwipateni yetshathi kwixesha elifutshane, ke ukuphuma okuphezulu okusebenzayo kunokuqinisekisa ukukhawuleza okuphezulu.
Esi sibini sasikwinqanaba lokulungisa kwaye alinakuphendukela kwinqanaba eliphambili kwixesha elifutshane. I-AUD inokumohlwaya ngokuhla kweNtengiso yeRetail yaseAustralia kwindawo engeyiyo. Isalathi sibhalise ukuhla nge-0.8% ngoFebruwari.
Kwelinye icala, i-Euro inokunyuka kwixesha elifutshane emva kokuba i-Euro-zone yokugqibela ye-PMI ye-PMI itsibe ukusuka kuma-62.4 ukuya kuma-62.5 amanqaku abonisa ukwanda, ngelixa i-German Final Production ihleli izinzile kuma-66.6 njengoko bekulindelekile.
I-EUR / AUD eyaphukileyo ngentla komgca wethambeka, iye yehla kancinci ukuphinda iphindaphinde uxhathiso olomeleleyo kwaye ngoku ihambela kwindlela ephezulu yokuxhathisa unxantathu.
Ukuqhekeka okukhohlakeleyo kwinqanaba le-pivot (1.5468) emva kokusilela ukufikelela kwisiginali ye-S1 abathengi abomeleleyo kunye nokukhula okuthe kratya. Ukuphuka okusebenzayo ngaphezulu kokuxhathisa konxantathu kunye nokuvala ngaphezulu kwe-1.5608 yangaphambili ephezulu kunokuqinisekisa ukubuyela umva kwi-bullish.
I-EUR / AUD inokukhulisa umlenze omtsha ukuba uphumile ngokusesikweni kwipateni encinci kwaye ukuba itsiba ngaphezulu kweendawo eziphakamileyo zangaphambili.
tags Aud, i-eur, EURAUD
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EUR / AUD-ngoFebruwari 4
Ukuhlaziywa: 4 Februwari 2021
The YeEUR / Aud kuthengiswe ngesantya esisezantsi kwiseshoni yaseYurophu ngoLwesine, njengoko i-EUR iphantsi koxinzelelo lwe-ECB.
Ilungu le-European Central Bank u-Klaas Knot kutshanje ukhalaze kabuhlungu ngoxabiso oluphezulu lwe-euro, eqonda ukuba iziko linezixhobo zokujongana nale ngxaki. Kungekudala emva koko, iingxelo zabonisa ukuba i-ECB inokulinciphisa inani lediphozithi-ngoku elihleli kwi -0.50% -ngaphaya. Olu phuhliso luxanduva lwemo yexinzelelo ejikeleze i-euro.
Okwangoku, ezinye iindawo eSpain sele ziphelelwe zizitofu, njengoko amazwe ebaleka ukugonya abemi bawo. Ukwehla kogonyo eSpain kusongela ukuphazamisa ukubuyiselwa kwezoqoqosho kulo mmandla, kubeka uxinzelelo olongezelelekileyo kwi-EUR.
Kwezinye iindaba, i-Aussie iqala ukonwabela imfuno ethile, kulandela ukukhutshwa kwedatha edityanisiweyo yase-Australia kule veki. I-Q4 Index Index yamaxabiso abathengi yangena nge-0.9% (YoY), ibetha i-0.7% yezoqoqosho, ngelixa i-RBA Trimmed Mean CPI Q4 (YoY) ingene nge-1.2%. Nangona kunjalo, i-NAB's Confidence Confidence ikhontrakthi ukuya kwi-4 ngo-Disemba 2020, ngelixa iimeko zeShishini zenyuka zaya kwi-14 kwangelo xesha linye.
Kuyafaneleka ukuba ukhankanye ukuba izinto ezinobungozi ezinje ngokukhula kwe-US-China, iindaba zokugonya, kunye nohlaziyo lwaseMelika olunokuthi lubeke inyathelo lexabiso le-AUD esekwe kumngcipheko kwiiyure nakwiintsuku ezizayo.
I-EURAUD-Itshathi yeeyure ezi-4
Uqikelelo lwexabiso le-EUR / AUD-ngoFebruwari 4
I-EUR / AUD Bias eNkulu: Ukukhupha
Amanqanaba okubonelela: I-1.5800, 1.5900, kunye ne-1.5950
Amanqanaba okufuna: I-1.5675, 1.6000, kunye ne-1.5500
Ngaphandle kokuthathwa kwempilo esempilweni kwiveki ephelileyo, i-EUR / AUD yahlala ingenakho ukugcina ikhefu ngaphezulu kweshaneli esihla nalo. Isibini ngoku siza kuba kuhambo oluya kwisiseko sejelo kwi-1.5400. Nangona kunjalo, ukugqitywa kwalo mjikelo kunokuthatha iintsuku ezininzi okanye iiveki.
Oko kwathethi, silindele ukulungiswa okuthe chu kwe-1.5800 yokumelana ngaphambi kokuba sibone ukuqhubeka kwe-bearish kwiiyure ezizayo.
Phawula: U-Learn2.Trade akangomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lweziphumo zakho zotyalo-mali.
tags EURAUD, Forex, iindaba
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EUR / AUD-nge-28 kaJanuwari
Ukuhlaziywa: 28 January 2021
The YeEUR / Aud kuthengiswe ngesantya esiphezulu kakhulu kwiseshoni yaseYurophu ngolwe-Si-Lwesine, njengoko imeko yomngcipheko wentengiso ithumele iAussie kwi-bearish spiral ngokuchaseneyo nezinye iimali eziphambili.
Izwe laseJamani linike ingxelo izolo ukuba iThemba loShishino leli lizwe lehle ukusuka kwi-92.2 ngoDisemba ukuya kwi-90.1 ngoJanuwari. Oku kuncipha kubeke uxinzelelo kwi-euro kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo.
Namhlanje, abathathi-nxaxheba beemarike baya kujonga kwingxelo ye-Euro Area Consumer Confidence kaJanuwari. I-speculators ilindele ukuba ingxelo ye-Consumer Confidence yehle ukusuka -13.9 ngo-Disemba ukuya -15.5 ngoJanuwari ngenxa yokuwa kwezoqoqosho ukusuka kumjelo wesibini we-coronavirus eYurophu.
Ixabiso leenguqu le-euro ngoku lixhomekeke kwimibiko yezoqoqosho ezayo evela kwi-EU.
Okwangoku, iLungu leBhunga elilawulayo le-ECB, kunye neRhuluneli yaseDatshi, uKlass Knot wenze amagqabantshintshi abonisa ukuba i-ECB ikulungele ukumilisela amanye amaxabiso amabi xa kufuneka njalo.
Kwezinye iindaba, iAustralia yokungenisa amaxabiso amaxabiso kunye nexabiso lokuthumela kwelinye ilizwe kwikota yesine kufuneka inike abathengisi baseAussie ulwazi malunga nokuba imali inokwenza ntoni kwixesha elikufutshane. Kufanelekile ukuba ukhankanye ukuba izinto eziguquguqukayo kumaxabiso ajikeleze i-AUD ziya kunyanzeliswa luphuculo kumlo oqhubekayo wase-US-China, uhlaziyo lwe-coronavirus, kunye neendaba zokugonya.
Uqikelelo lwexabiso le-EUR / AUD-nge-28 kaJanuwari
I-EUR / AUD Bias eNkulu: Ukunyusa
Amanqanaba okubonelela: I-1.6000, 1.6100, kunye ne-1.6200
Amanqanaba okufuna: I-1.5800, 1.5675, kunye ne-1.5600
I-EUR / AUD igcine i-bullish streak okoko kwavela ipateni ephantsi kabini kwiveki ephelileyo. Ukulandela ukubuyela emva ngokuthobekileyo ukusuka ku-1.5800 ukumelana (ngoku inkxaso) ukuya kwinqanaba le-1.5675, isibini semali siqalise isaphulelo esomeleleyo kwindawo ye-1.5900 apho ikhoyo ngoku.
Nangona kunjalo, esi sibini ngoku sifikelele encotsheni yesiteshi sethu esihlayo, sicebisa ukuba ukwehla okukhulu kunokuba kwikona nje. Oko kwathethi, i-EUR / AUD inokulichitha eli jelo ukuba eli phulo lokuphinda ulibuyisele kwindawo eyi-1.6000 pivot.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EUR / AUD-nge-21 kaJanuwari
The YeEUR / Aud iqala ukufumana amandla afudumeleyo, kulandela ukubuyela kwakhona kunye nokwaliwa kwinqanaba le-1.5600 lenkxaso kunye ne-Euro ekhulayo.
I-European Union (i-EU) ixele izolo ukuba i-Euro Area inflation Rate yehle nge-0.3% YoY ngoDisemba, ngelixa i-Core inflation Rate inyuke nge-0.2% -izalisa iingqikelelo zabahlalutyi.
Ngeli xesha, amaxabiso ahlala ebuthathaka kwindawo ye-Euro ngenxa yempembelelo eyonakalisayo ye-wave yesibini ye-coronavirus kuloo mmandla. Le nto inoxanduva lobuthathaka obonwa kwi-Euro iiveki ngoku.
Ukuqhubela phambili, intengiso yeFX iya kujonga i-ECB ngokusondeleyo namhlanje, njengoko icwangciselwe ukukhupha isigqibo sayo seNzala kunye nezinye izimvo. I-speculators iqinisekile ukuba iirhafu ziya kuhlala zingatshintshi, ngelixa abarhwebi beza kugxila kuvavanyo lwe-ECB ngemeko yezoqoqosho ekhoyo.
Kwezinye iindaba, i-Australia kutsha nje inike ingxelo yenani labangasebenziyo, erekhoda ukwehla ukusuka kwi-6.8% ngo-Novemba ukuya kwi-6.6% ngoDisemba, egqitha uqikelelo lwabathengisi. Okwangoku, idatha yoTshintsho kwezeNgqesho ibonise ukuba ingqesho kweli lizwe inyuke nge-50k ngoDisemba, ikwahambelana noqikelelo.
Nangona kunjalo, ukwehla kokuqeshwa ngokusisigxina kugcine iinkunzi zeenkomo zaseAussie ekubekeni ukubheja okukhohlakeleyo, okunciphise amathuba okufumana inzuzo ebalulekileyo kwimali ngokuchasene ne-EUR.
Uqikelelo lwexabiso le-EUR / AUD-nge-21 kaJanuwari
Amanqanaba okubonelela: I-1.5675, 1.5800, kunye ne-1.5900
Amanqanaba okufuna: I-1.5600, 1.5500, kunye ne-1.5400
I-EUR / AUD ibonakala ngathi ilungiselela umhlangano wokunyusa kwiiyure nakwiintsuku ezizayo. Aba babini barekhodile iphatheni esezantsi kabini kwitshathi yethu yeeyure ezi-4, ebonisa ukuba ukubuyisela endaweni kwakhona kunokujikeleza ikona. Umgca wengqondo we-1.5600-ongaphulwanga ukusukela ngoDisemba 2018- uya kusebenza njengegxotha iinkunzi ze-AUD okwangoku.
Ngaphandle kwalonto, ukwehla kwenkxaso ye-1.5600 kukwahambelana nendawo yokuhla kwejelo lethu, kuqinisa ngakumbi ithemba lokuphinda kubuyiselwe endaweni enye kungekudala.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EUR / AUD-nge-14 kaJanuwari
Ukuhlaziywa: 14 January 2021
I-EUR / AUD iqhubeke ngokuhla okubukhali ukuya kwi-1.5600 kwiseshoni ye-Europe ngoLwesine, phakathi kwe-Euro ebuthathaka.
Ukungaqiniseki kwezopolitiko e-Italiya kubangele ukuba abatyali mali babekelwe i-EUR. Abaphathiswa abathathu bombutho olawulayo balahlile izolo, bebeka iNkulumbuso yexesha elizayo, uGiuseppe Conte, kwindawo ebuthathaka.
Ukuba uConte akakwazi ukudibanisa uninzi olutsha kungekudala, kunokwenzeka ukuba asuswe kurhulumente omtsha. Nangona kunjalo, unyulo lwakwangoko alunakulungelelaniswa ngenxa yobhubhane, hayi ubuncinci kuzo zonke ezinye iindlela ezigqityiweyo yipalamente.
Okwangoku, i-PEPP ye-ECB ibiluncedo olukhulu kwintengiso yamatyala e-Itali kwaye iya kugcina iziphumo ezibi ezivela ekuweni kwezopolitiko, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo ukuba i-ECB isandula nje ukuthengisa okucwangcisiweyo ukuya kwi-EUR1.85 yezigidigidi. I-Itali ikwacwangciselwe ukufumana i-EUR208 yezigidigidi zeNgxowa-mali yokuBuyisa i-EU. Oko kwathiwa, ezi zinto kufuneka zithintele ukwehla okungathintelwanga kwe-EUR kwixesha elikufutshane,
Kwezinye iindaba, ukucinywa okusondeleyo kwe-COVID-19, imeko yengozi yentengiso yehlabathi, kunye nokuvezwa okuqhubekayo kwimfuno zaseAsia kuluncedo olukhulu ekuqhubeni ixabiso laseAussie ngaphezulu. Oko kwathethileyo, abacebisi baqala ukucebisa ukuba i-RBA inokutyhala ngokuchasene ne-AUD eyomeleleyo ngokusebenzisa imigaqo-nkqubo yemali engaphaya.
Uqikelelo lwexabiso le-EUR / AUD-nge-14 kaJanuwari
I-EUR / AUD ibambelela kwisitya sethu esihlayo njengoko inkxaso ye-1.5600 yengqondo iza kuqala ukubonwa ngaphezulu kweminyaka emibini. Iinkunzi zinokusebenzisa ithuba lokuba le sibini ifike kwisiseko sejelo lethu njengethuba lokuthatha ixabiso liphezulu.
Oko kwathethi, ukungaphumeleli kwe-EUR / AUD ukulungiselela ukubheja ngaphezulu kwe-1.5675 ukumelana neeyure kunye neentsuku ezizayo kunokuqinisekisa ukwehla kwi-1.5600 nangaphantsi.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EUR / AUD-nge-7 kaJanuwari
Ukuhlaziywa: 7 January 2021
I-EUR / AUD ithengiswe ngomjikelo wecala elijikeleze i-1.5835 ngoLwesine, phakathi kwesiphithiphithi e-US Capitol.
I-Euro ichukunyiswe ikakhulu kukushukunyiswa kwemali ekhuphisanayo. Nangona kunjalo, imeko yokuvuselela uqoqosho kwi-Eurozone iyaqhubeka nokuzinzisa imali ngokuchasene nokuhla okukhulu kwezezimali.
Okwangoku, ukuhamba kwexabiso le-EUR / AUD kule veki kuye kwakhokelwa yi-Aussie, njengoko idatha ye-Eurozone ebhetele kunale bekulindelwe ukuba isilele ukwenza naliphi na isoyikiso kumaxabiso e-EUR. Imiyalelo yefektri yaseJamani ukusuka ngo-Novemba yenze ngcono kunengqikelelo, njengoko ibetha ukubetha okulindelweyo kwaye yangena nge-2.3%. Nangona kunjalo, i-PMI yoLwakhiwo lwe-Eurozone yayimbi kakhulu kunokuba bekulindelwe kwi-45.5.
Ithemba lokuba izitofu zokugonya zeCoronavirus ziya kuqinisa ukubuyiselwa kuqoqosho lwe-Eurozone luyaqhubeka nokubonelela ngenkxaso ye-EUR.
Kwezinye iindaba, i-Aussie-ehambelana kakhulu nemeko yokuthengisa emngciphekweni-ibisematheni kule veki kulandela uphuculo lwakutsha nje kwezopolitiko zehlabathi kunye nobhubhane we-COVID-19.
Kuqhume isiphithiphithi e-DC, e-USA izolo, nanjengoko abalandeli bakaTrump abonelisekanga bangene kwisakhiwo seCongress bekhalazela iziphumo zonyulo zase-US. Ihlokondiba laxhokonxwa nguMongameli wase-US uDonald Trump, oqhubeka nokubanga ngokungafanelekanga-ngokutsho kwemithombo esemthethweni-ukuba unyulo 'lwalubiwe' kuye.
Abatyalomali ngokunyamezeleka komngcipheko kulindeleke ukuba baqhubeke nokuthenga i-AUD, zakuba nje izidubedube zezopolitiko e-US ziphelile.
Uqikelelo lwexabiso le-EUR / AUD-nge-7 kaJanuwari
I-EUR / AUD Bias eNkulu: Iindlela
Amanqanaba okubonelela: I-1.5900, 1.6000, kunye ne-1.6100
I-EUR / AUD iyaqhubeka nokuma malunga ne-1.5800 yenkxaso ebalulekileyo, ebonisa ukuba iibhere ziphulukana namandla. Akumangalisi ukuba olu manyano lwenzeka kufutshane nesiseko sejelo lethu elihlayo, kwaye silindele ukulungiswa ukuya phezulu (1.6100) kwiintsuku nakwiiveki ezizayo.
Okwangoku, isalathiso seMACD sibonisa ukuba esi sibini sikwimeko ezigqithileyo, kwaye ukulungiswa kweemeko ezingathathi cala kunokuba kuqhubeka.
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EUR / AUD-nge-31 kaDisemba
I-EUR / AUD iqhubekile nokwehla kwe-bearish kwiseshoni yaseYurophu ngoLwesine, njengoko iAussie exhaswa ngumngcipheko inyuka phakathi kwemizamo ye-ECB yokunciphisa i-Euro.
Ilungu leBhunga elilawulayo le-ECB u-Oli Rehn uziphindaphindile izimvo ezenziwa ngamanye amalungu e-ECB- njengo Mongameli uChristine Lagarde, uFrancois Villeroy de Galhau, kunye noPhilip Lane —'babone 'i-EUR. Amagqabantshintshi afana nalawo aklanyelwe ukuphazamisa izinga lokukhula kwe-EUR, ngakumbi ngokuchasene nedola yaseMelika (DXY). Kule meko, i-GCM icacisile ukuba ukuba i-Euro iyaqhubeka nokuxabisa i-ECB "iya kwenza okuthile ngayo."
Nangona kunjalo, ngaphandle kokuba ibhanki ikulungele ukunciphisa iimeko zemali ngakumbi ngokunciphisa inzala kunye nokwandisa isantya sokuthengwa kweeasethi, abahlalutyi bakholelwa ukuba i-ECB yinto nje ebabazekayo. Sele ibhanki ibhengeze kwangoko ngeyoMnga ukuba iinjongo zayo okwangoku yayikukugcina umgaqo-nkqubo wezemali osele ufumanekile, mhlawumbi ixesha elandisiweyo. Le nkcukacha yenza ukuba abahlalutyi baqiniseke ngakumbi ukuba i-ECB yayi-bluffing xa iqaphela ukuba inokwenza lula iimeko zemali ngakumbi.
Okwangoku, i-Aussie ifumene ukonyusa amaxabiso okonyusa ukukhutshwa kwedatha e-upbeat kwi-China esemthethweni yokuThenga abaPhathi (i-PMI) ka-Disemba. I-National Bureau of Statistics (NBS) yase China inike ingxelo yokuba i-PMI yezeMveliso kaDisemba yehle ukusuka kwi-52.4 ukuya kwi-51.9, ngelixa i-PMI engeyiyo eyokuThengisa inyukile yadlula kwi-56.4 yokufunda kwangaphambili ukuya kuma-55.7.
Oko kwathethi, i-AUD kulindeleke ukuba iqhubeke nokufumana ngokuchasene ne-EUR kwiintsuku ezizayo.
Uqikelelo lwexabiso le-EUR / AUD - ngoDisemba 31
Amanqanaba okubonelela: I-1.6008, 1.6100, kunye ne-1.6200
Amanqanaba okufuna: I-1.5900, 1.5800, kunye ne-1.5675
I-EUR / AUD okwangoku ithintela ukuya kwinqanaba le-1.5900, kwaye sinokubona ezantsi kwiintsuku ezizayo. Iibhere zifumene ubungqina izolo kulandela ikhefu elingaphantsi kwenqaku elibalulekileyo le-1.6008.
Okwangoku, esi sibini sisekude kude neemeko ezigqithileyo, oko kuthetha ukuba ukwehla okuninzi kunokwenzeka kwiintsuku ezizayo. Nangona kunjalo, kufanelekile ukuba ukhankanye ukuba amandla akhoyo e-bearish anokuchaswa ukuba i-EUR / AUD ifumana ibango elisempilweni kwindawo eyi-1.5900.
Uqikelelo lonyaka lwe-EUR / AUD (2021): Ukudityaniswa kwexesha elide kuXaxa ngaphambili
Ukuhlaziywa: 24 Disemba 2020
I-EUR / AUD ibinonyaka onengxaki kodwa ikwazile ukuphela phantse kanye apho iqale khona, i-1.6100. Ngaphambi kokuba siye kubuchwephesha, makhe sijonge ezinye zezinto eziphambili ezinokuchaphazela esi sibini ngo-2021.
I-European Central Bank iceba ukuyenza buthathaka i-Euro ukuze inyuse umgangatho wokunyuka kwamaxabiso e-Eurozone, ithathela ingqalelo ukuba ungenelelo oluthe ngqo kutshintshiselwano lwangaphandle kubonakala ngathi alunakwenzeka okwangoku.
I-ECB iya kuthi inciphise umgaqo-nkqubo wayo wezemali kwikota yokuqala ka-2021 ukomeleza uqoqosho phakathi kwengxaki yemali ebangelwe ngubhubhane, kwaye ngamaxesha aqhelekileyo anokuthi ayenze buthathaka i-Euro. Nangona kunjalo, unxibelelwano phakathi komgaqo-nkqubo wezemali kunye ne-EUR kubonakala ngathi utshintshiwe kwakamsinya emva kokuqhambuka kweCoronavirus. Oko kwathiwa, ukuqhubeka ngokulula kwe-ECB kwi-2021 ngekhe kuyichaphazele i-Euro.
Ngeli xesha, i-Aussie ikwahlala inyanzelekile njengoko iBhanki enguVimba yase-Australia iqhubeka nokubamba umgaqo-nkqubo wezinga lenzala elibi (NIRP). I-RBA iyakuthi igcine i-OCR) kwiirekhodi ezisezantsi ze-0.10% kwintlanganiso elandelayo kwikota yokuqala ye-2021, njengoko iRhuluneli uPhilip Lowe kunye nabanye abenzi bomgaqo-nkqubo weRBA bahlala beqinile kwisigqibo sabo sokugcina inzala ingentla. amanqanaba amabi.
Oko kwathethi, i-RBA inokuqhubeka nokusebenzisa ibalance sheet yayo ukuxhasa uqoqosho lwase-Australia emva kokubhengeza izicwangciso zokuthenga "i-100 yezigidigidi zeebhondi zikarhulumente kunye nokuvuthwa malunga ne-5 ukuya kwi-10 leminyaka kwiinyanga ezintandathu ezizayo" emva ko-Novemba.
Nangona kunjalo, i-ASX 30 Day Interbank Cash Rate Futures ngoFebruwari 2021 ikhontrakthi zibonisa ukuba elinye ireyithi yokuncipha ikufutshane nekona, kulindelwe ukwehla kwenzala ye-65% ukuya kwi-0.00% kwintlanganiso yeBhodi elandelayo yeRBA.
Oko kwathethi, i-EUR / AUD inokuqhubeka nokuqhubeka kakuhle ngoFebruwari 2-intlanganiso elandelayo ye-RBA-njengoko iibhanki eziphambili ziqhubeka nokuziphinda kabini kwimizamo yabo yokunyusa uqoqosho lwehlabathi.
Uqikelelo lwexabiso le-EUR / AUD - 2021
I-EUR / AUD 2021 Bias: Iindlela
Amanqanaba okubonelela: I-1.6800, 1.7300, kunye ne-1.8000
Amanqanaba okufuna: I-1.6000, 1.5675, kunye ne-1.5120
I-2020 yabona urhwebo lwe-EUR / AUD ngokuthe ngcembe lonyusa ishaneli, ngaphambi komsitho omnyama wangoLwesine ngo-Matshi, obangele ukuba esi sibini sibeke kufutshane ne-2.0000. Aba babini bachitha phantse intsalela yonyaka bechacha kuloo spike ukuya kwimo yayo yoqobo.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-EUR / AUD iya kuhlala ibotshelelwe kumqolo we-2021 phakathi kwe-1.6600 kunye ne-1.6000.
Ukulandela eli xesha, esi sibini sinokuphinda sibuyele kwisitishi esinyukayo. Oko kwathethileyo, elona themba liphantsi le-EUR / AUD yi-1.5800, ngelixa elona liphezulu lilindelekileyo kuthi li-1.7600 inani elijikelezileyo.
tags EURAUD, yaqikelelwa, Forex
Uhlalutyo lwamaxabiso e-EUR / AUD-nge-17 kaDisemba
Ukuhlaziywa: 17 Disemba 2020
I-EUR / AUD ithengise ngesantya esiphezulu kwiiseshoni zaseYurophu ngoLwesine, njengoko ukungazinzi kwiimarike kuyanda.
Uthethathethwano phakathi kwe-EU kunye ne-UK malunga nesivumelwano kurhwebo saseBrexit kubonakala ngathi senza inkqubela phambili. Nangona kunjalo, omabini la macala ahlala engagungqi kwicandelo lokuloba, umba onobuzaza kuwo omabini amaqela. Nangona kunjalo, i-rally yakutshanje kwiPound itsala i-Euro.
Okwangoku, iimeko ze-COVID-19 kwilizwekazi liphela ziyaqhubeka nokusasazeka ngaphandle kwamanyathelo ahlaziyiweyo kwaye bosulele uMongameli wase-France u-Emmanuel Macron.
Izolo, i-EU ichaze okungcono kunokuba bekulindelwe i-PMI yokuThengisa kunye neeNkonzo ze-PMI amanani, abonisa ukubuyela kwimeko entle kwezoqoqosho ngaphandle kwesiphumo sobhubhane weCoronavirus kwi-euro.
Kamva namhlanje, i-EU izakupapasha idatha yayo yokunyuka kwamaxabiso ngoNovemba. Abahlalutyi balindele ingxelo yokunyusa inqanaba lokunyuka kwamaxabiso (iYoY) kunye nexabiso lokunyuka kwamaxabiso.
Kwezinye iindaba, ukusebenza ngokuqinileyo kwempahla yorhwebo kuya kuqhubeka ukuba ngumthombo wamandla kwiAussie. Ukuthunyelwa kwentsimbi ngaphandle kwentsimbi kuqhekeze irekhodi elitsha le-A $ 11 yezigidigidi ngo-Okthobha kwaye imele ama-36% e-Australia iyonke ethunyelwa ngaphandle. Icandelo lezemigodi belinoxanduva lokuphucula uhlahlo-lwabiwo mali oluchazwe ngurhulumente wase-Australia kule veki.
Nangona kunjalo, amanye amanyathelo okunciphisa kunye nomgaqo-nkqubo wemali we-Reserve Bank yase-Australia ngo-2021 unokubeka isiciko kuyo nayiphi na irali ebalulekileyo e-Aussie.
Uqikelelo lwexabiso le-EUR / AUD - ngoDisemba 17
Amanqanaba okubonelela: I-1.6100, 1.6150, kunye ne-1.6200
Amanqanaba okufuna: I-1.6000, 1.5950, kunye ne-1.5900
I-EUR / AUD ihlupheke ngokuntywila kwangoko namhlanje, emva kwexesha lokudityaniswa kweentsuku ezisixhenxe phakathi kwe-1.6140 - 1.6050. Esi sibini asiphumelelanga ukubuyisa inqanaba elibalulekileyo le-1.6100, lisenza ukuhla okuthe kratya okwangoku.
Nangona kunjalo, i-EUR / AUD ibone i-goodish bounce kwinqanaba le-1.6000 yengqondo kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo. Ukusilela ukubuyisa unyawo ngaphezulu kwexabiso lentengo le-1.6100 kwiiyure ezizayo kunokunyanzela esi sibini singaphantsi kwe-1.6000.